Latest News - Retail Master Group Web Site
မွနျမာနိုငျငံပထမဦးဆုံး နှငျ့ တဈခုတညျးသော လကျလီလုပျငနျး (Retailing Industry) ဆိုငျရာ သငျတနျးကြောငျး
Retail Master Retail School သညျလကျလီလုပျငနျး ဆိုငျရာဘာသာရပျမြားနှငျ့ လုပျငနျးခှငျစီမံခနျ့ခှဲမှုဆိုငျရာဘာသာရပျမြားကို အထူးပွု သငျကွားလကေ့ငျြ့ပေးနသေညျ့ သငျတနျးကြောငျး ဖွဈပါသညျ။
Upcoming Event & Seminar
မြန်မာနိုင်ငံပထမဦးဆုံး နှင့် တစ်ခုတည်းသော လက်လီလုပ်ငန်း (Retailing Industry) ဆိုင်ရာ သင်တန်းကျောင်း
Retail Master Retail School သည် လက်လီလုပ်ငန်း ဆိုင်ရာဘာသာရပ်များ နှင့် လုပ်ငန်းခွင် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များကို အထူးပြု သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးနေသည့် သင်တန်းကျောင်း ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၆ခုနှစ် မတ်လ (၁၂)ရက်နေ့မှစတင်၍ သင်တန်းအပတ်စဉ် အမှတ်(၄) အဖြစ် အောက်ဖော်ပြပါ ဘာသာရပ်များကိုသတ်မှတ်တန်းခွဲအချိန်ဇယားများ အတိုင်း ဖွင့်လှစ် သင်ကြားပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၅-ရက် ၂၀၁၇ခုနှစ်တွင်စတင်ဖွင့်လှစ်မည့်အောက်ဖော်ပြပါဘာသာရပ်တန်းခွဲများအတွက် သင်တန်းသားစတင်လက်ခံပေးနေပြီဖြစ်ပါကြောင်းသတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါသည်။
(1) Certificate in Retail Operation Management Skills
သင်တန်းချိန် - နံနက် ၉:၀၀ မှ နေ့လည် ၁:၀၀ အထိ
သင်ကြားချိန် - စုစုပေါင်း ၂၄-နာရီ + လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင့်လေ့လာရေးခရီးစဉ်အပါအဝင်
(2)Certificate in Administration and Office Management Skills
သင်တန်းချိန် - နေ့လည် ၂:၀၀ မှ ညနေ ၆:၀၀ အထိ
• သင်တန်းကြေး - ၈ သောင်းကျပ် (သင်တန်းအင်္ကျီ၊သင်တန်းဆင်းအောင်လက်မှတ်၊ သင်ထောက်ကူစာရွက်စာတမ်း Student Kit နှင့် Coffee Time ပါဝင်ပြီးအပြီးအစီး)
• သင်တန်းရက် - အပတ်စဉ် တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း
• သင်တန်းအပ်နှံမှုဖောင်ပိတ်ရက် - ၄ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၁၇ခုနှစ် စနေနေ့
ဆရာ Retail Master
PGD (Retail Management, MIT-India)
MBA (Retail Management, JNU-India)
စာတွေ့လေ့လာသင်ကြားမှု - ၄၅%
လက်တွေလေ့ကျင့်လုပ်ဆောင်မှု - ၃၀%
အုပ်စုဖွဲ့စဉ်းစားညှိနှိုင်းလုပ်ဆောင်မှု - ၂၅%
လက်လီလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာမြောက်စီမံခန့်ခွဲလုပ်ဆောင်မှုများကို လက်တွေ့ကျစွာလေ့လာလိုသူများအတွက်
Certificate in Strategic Retail Management
အပတ်စဉ် တနင်္လာနေ့၊ အင်္ဂါနေ့နှင့်ဗုဒွဟူးနေ့တိုင်း ညနေ ၆-နာရီ မှ ည ၈-နာရီ အထိ သင်ကြားမှုနာရီပေါင်း (၂၀-နာရီ)
World of Retailing Industry
Buying and Handling Merchandising
Managing the Store etc.
Certificate in Customer Service Professional and Retail Selling Skills
အပတ်စဉ် စနေနှင့်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း ညနေ ၆-နာရီ မှ ည ၈-နာရီ အထိ သင်ကြားမှုနာရီပေါင်း (၂၀-နာရီ)
Fundamental of Customer Service
The Handling Customer Complaints
Retail Sale Process
How to becomeasuccessful CSA etc.
ထိရောက်စနစ်ကျသော အရောင်းဖြန့်ချီရေးလုပ်ဆောင်မှုများကို ကြီးကြပ်လုပ်ဆောင်လိုသူများအတွက်
Certificate in Sale Supervisory Skills (For Sale & Distribution Industry)
အပတ်စဉ် စနေနှင့်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း ညနေ ၃-နာရီ မှ ညနေ ၅-နာရီ အထိသင်ကြားမှုနာရီပေါင်း (၂၀-နာရီ)
Introduction to Selling and Sale
Planning and Preparing to Sale Call
Process of Introduction
Surveying Call Opportunities
Sale Forecasting and Quotas
စနစ်ကျသော ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာရုံးတွင်းစီမံခန့်ခွဲလုပ်ဆောင်မှုများကို လက်တွေ့ကျစွာလေ့လာလိုသူများအတွက်
Certificate in Office Management (For All Industries)
အပတ်စဉ် စနေနှင့်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း နံနက် ၁၀-နာရီ မှ နေ့လည် ၁၂-နာရီ အထိသင်ကြားမှုနာရီပေါင်း (၂၀-နာရီ)
Customer Service Skills and Personal Qualities
ပထမဦးဆုံးအပ်နှံသည့် သင်တန်းသား(၁၀-ဦး) အတွက် ၁၀%သက်သာခွင့်
ဘာသာရပ်များအားလုံးကို နိုင်ငံတကာသင်ရိုးညွန်းတမ်းများကို အခြေခံ၍ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုများ၊ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းအဖြေ ရှာလေ့ကျင့်မှုများ၊ တင်ဆက်ပြောဆိုလေ့ကျင့်လုပ်ဆောင်မှုများ၊ နည်းဗျူဟာဆိုင်ရာကစားနည်းများ ကစားခြင်းများ စသည့် လုပ်ငန်းခွင် တွင် ပြန်လည်အသုံးချနိုင်စေရန် သင်တန်းသားဗဟိုပြုသင်ကြားမှုနည်းစနစ်များကို အသုံးပြု၍ ဆရာ Retail Master ကိုယ်တိုင် သင်ကြား လေ့ကျင့် ဆွေးနွေးပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
(ဘာသာရပ်အလိုက်သင်ကြားမှုခေါင်းစဉ်များကို www.retailmastergroup.com တွင်လည်း ဖော်ပြပေးထားပါသည်။)
Retail Master Retail School သင်တန်းကျောင်း ၏ သင်တန်းအပတ်စဉ် အမှတ်(၅) ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် ၊ မေလ (၂၂) ရက်နေ့တွင်
Selling and Sale Management
Retail Business Operation Management
စသည့်ဘာသာရပ်များ ကို နိုင်ငံတကာသင်ရိုးညွန်းများနှင့်အညီ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုများ ၊ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးညှိုနှိုင်းအဖြေရှာ လေ့ကျင့်မှုများ ၊ တင်ဆက်ပြောဆိုလေ့ကျင့်လုပ်ဆောင်မှုများဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်တွင် ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး သင်တန်းသားဗဟိုပြုသင်ကြားမှု နည်းစနစ်များဖြင့်သင်ကြားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။
# Special Promotion #
ပထမဦးဆုံး အပ်နှံသည့် သင်တန်းသား (၁၀ဦး) 10%(Off)
၅ဦးနှင့် အထက်အပ်နှံသည့် အဖွဲ့အစည်းများအတွက် 15%(Off)
Retail Master Retail School သည် လက်လီလုပ်ငန်း ဆိုင်ရာဘာသာရပ်များ နှင့် လုပ်ငန်းခွင် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များ ကို အထူးပြုသင်ကြားပေးနေသည့် အလုပ်အကိုင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ဆိုင်ရာ သီးသန့်သင်တန်းကျောင်း (Vocational Training School) ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၅ခုနှစ် ဇွန်လ (၁၄)ရက်နေ့မှစတင်၍ သင်တန်းအပတ်စဉ် အမှတ်(၄) အဖြစ် အောက်ဖော်ပြပါ ဘာသာရပ်များကို သတ်မှတ်တန်းခွဲအချိန်ဇယားများအတိုင်း ဖွင့်လှစ် သင်ကြားပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
လက်လီလုပ်ငန်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဘာသာရပ်များ သင်တန်းကြေး (၇၀၀၀၀-ကျပ်)
စီးပွားရေးဆိုင်ရာ စွန့်ဦးတီထွင်မှုများနှင့်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်လုပ်ဆောင်လိုသူများအတွက်
အပတ်စဉ် တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း နံနက် ၁၀-နာရီ မှ နေ့လည် ၂-နာရီအထိ
The Right Small Business
Managing Firm’s Assets
လက်လီလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စနစ်ကျသော စီမံခန့် ခွဲလုပ်ဆောင်မှုများကို လက်တွေ့ကျစွာလေ့လာလိုသူများအတွက်
အပတ်စဉ် တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း ညနေ ၃-နာရီ မှ ည ၇-နာရီ ၃၀မိနစ် အထိ
Introduction to Retailing Industry
Theories of Retail Development and Competition
Retail Store Site Selection
Retail Buying and Handling Merchandise Mix
Managing the Retail Store
ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်လက်လီရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာ နည်းစနစ်များကို ထိရောက်စွာဖော်ဆောင်လိုသူများအတွက်
Certificate in Customer Service and Retail Sale Management
အပတ်စဉ် အင်္ဂါနေ့ နှင့်ဗုဒွဟူးနေ့တိုင်း ညနေ ၆-နာရီ မှ ည ၈-နာရီ အထိ
The Retail Sale Process
How to becomeaSuccessful CSA
အရောင်းနှင့်ဖြန့် ချီရေးဆိုင်ရာ ကြိုတင်အစီအမံများရေးဆွဲ၍ စနစ်ကျသော အရောင်းအဖွဲ့အစည်းစနစ်ဖော်ဆောင်လိုသူများအတွက်
Certificate in Selling and Sale Management
အပတ်စဉ် ကြာသပတေးနေ့နှင့်သောကြာနေ့တိုင်း ညနေ ၆-နာရီ မှ ည ၈-နာရီ အထိ
Establish in Sale Plan
Distribution Management and Plan
ဘာသာရပ်များအားလုံးကို နိုင်ငံတကာသင်ရိုးညွန်းတမ်းများကို အခြေခံ၍ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုများ၊ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်း အဖြေရှာလေ့ကျင့်မှုများ၊ တင်ဆက်ပြောဆိုလေ့ကျင့်လုပ်ဆောင်မှုများ၊ နည်းဗျူဟာဆိုင်ရာကစားနည်းများ ကစားခြင်းများ စသည့် လုပ်ငန်းခွင်တွင် ပြန်လည်အသုံးချနိုင်စေရန် သင်တန်းသင်ဗဟိုပြုသင်ကြားမှုနည်းစနစ်များကို အသုံးပြု၍ သင်ကြားလေ့ကျင့်ဆွေးနွေး ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
အလုပ်အကိုင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ သီးသန့်သင်တန်းကျောင်း
၂၀၁၅ခုနှစ် မတ်လ(၇)ရက်နေ့မှစတင်၍ အောက်ဖော်ပြပါဘာသာရပ်များကို သတ်မှတ်တန်းခွဲအချိန်ဇယားများအတိုင်းထပ်မံဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
(က) စတိုးဆိုင်များ၊ မတ်ခ်များ၊ စင်တာများ စသည့် လက်လီလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စီမံခန့် ခွဲမှုများကို လက်တွေ့ကျစွာလေ့လာလိုသူများအတွက်
အပတ်စဉ် စနေနေ့တိုင်း နံနက် (၉:၀၀-၁၁:၀၀)အထိ
သင်တန်းစတင်ဖွင့်လှစ်မည့်ရက် - ၇ မတ်လ ၂၀၁၅ခုနှစ်
သင်တန်းကြေး - ၅၀၀၀၀ ကျပ် (Complementary of Student Kit)
(ခ) လက်လီလုပ်ငန်းများတွင် မရှိမဖြစ်သော ဈေးဝယ်သူဝန်ဆောင်မှုနှင့် ရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာနည်းလမ်းများကို ထိရောက်စွာလုပ်ဆောင်လိုသူများအတွက်
Certificate in Customer Service & Retail Selling Management
အပတ်စဉ် စနေနေ့တိုင်း နေ့လည် (၁၂:၀၀-၂:၀၀)အထိ
(ဂ) လက်လီဆိုင်များ၏ စည်းစနစ်ကျသော လုပ်ငန်းခွင်လုပ်ဆောင်မှုများကို အသေးစိတ်လေ့လာလိုသူများအတွက်
Certification in Retail Store Operation Management
အပတ်စဉ် စနေနေ့တိုင်း ညနေ (၃:၀၀-၅:၀၀)အထိ
(ဃ) လက်လီလုပ်ငန်းများတွင် မရှိမဖြစ်အရေးပါသော ဆွဲဆောင်မှုရှိစွာ ကုန်ပစ္စည်းခင်းကျင်းပြသလိုသူများအတွက်
Certificate in Retail Visual Merchandising Management
အပတ်စဉ် စနေနေ့တိုင်း ညနေ (၅:၃၀-၇:၃၀)အထိ
သင်တန်းကြေး - ၇၀၀၀၀ ကျပ် (Complementary of Student Kit)
အထက်ပါအမှတ်စဉ် (က) မှ (ဃ) အထိ ဘာသာရပ် (၄)မျိုးစလုံးအား တပြိုင်တည်းတက်ရောက်ပြီး သင်တန်းပြီးဆုံးအောင်မြင်သူများသည် Retail Business Management Group Certificate (၁-ခု) နှင့်တကွ ဘာသာရပ် (၄-မျိုး)အတွက် Certificate (၄-ခု) အပါအဝင် စုစုပေါင်း (၅-ခု) ကို (အထူး) သက်သာသောသင်တန်းကြေး (စုစုပေါင်း-၁၂၀၀၀၀-ကျပ်) ဖြင့် တပြိုင်တည်း ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
(က) အမျိုးမျိုးသောလုပ်ငန်းများတွင် အရေးကြီးဆုံးသော လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်စီမံ ခန့်ခွဲမှုများကို လက်တွေ့ကျစွာ လေ့လာလိုသူများအတွက်
အပတ်စဉ် တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း နံနက် (၁၀:၀၀-၂:၃၀)အထိ
သင်တန်းစတင်ဖွင့်လှစ်မည့်ရက် - ၈ မတ်လ ၂၀၁၅ခုနှစ်
(ခ) အမျိုးမျိုးသောလုပ်ငန်းများတွင် စည်းစနစ်ကျသောဈေးကွက်ထိုးဖောက်မြှင့်တင်မှုနည်းလမ်းများကို အသုံးပြုလေ့လာလိုသူများအတွက်
အပတ်စဉ် တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း ညနေ (၃:၀၀-၅:၀၀)အထိ
(ဂ) ဖြန့်ချီရေးလုပ်ငန်းများတွင် အရေးပါဆုံးသော ရောင်းချခြင်းနှင့်ဖြန့်ချီရေးဆိုင်ရာ ကြိုတင်အစီအမံများ ရေးဆွဲဆောင်ရွက်လိုသူများအတွက်
အပတ်စဉ် တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း ညနေ (၅:၃၀-၇:၃၀)အထိ
ဘာသာရပ်များအားလုံးကို နိုင်ငံတကာနှင့် ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းများတွင် လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ လုပ်သက်အတွေ့အကြုံရှိသော ဆရာများမှ နိုင်ငံတကာသင်ရိုးညွှန်းတမ်းများကိုအခြေခံ၍ လက်တွေ့လေ့ကျင့်လုပ်ဆောင်မှုများ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းအဖြေရှာမှုများတင်ဆက်ပြော ဆိုလေ့ကျင့်မှုများနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာနည်းဗျူဟာကစားနည်းများ စသည့် သင်တန်းသားဗဟိုပြု သင်ကြားလေ့ကျင့်မှုနည်းစနစ်ပုံစံများကို အသုံးပြု၍ လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်တွင် ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ သင်ကြားပြသပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
အရောင်းမြှင့်တင်မှုဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ မွေးထုတ်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမှုအစီအစဉ်များ (PG Development Programme)
ဖြန့်ချီရေးကုမ္ပဏီများနှင့် ကွန်ပြူတာ/မိုဘိုင်းဖုန်းနည်းပညာကုမ္ပဏီများအတွက် ကုန်ပစ္စည်းအရောင်းမြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ (Promotion Girl, Product/Brand Consultant, Customer Service Advisor) စသည့် အရောင်းမြှင့်တင်ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ အထူးဝန်ထမ်းကောင်းများ မွေးထုတ်လေ့ကျင့်ပေးခြင်း (PG Skills Developments Programme) များကိုလည်း စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။
လုပ်ငန်းခွင်အရောက် အထူးရက်တိုသင်တန်းများ(Corporate Training) နှင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ(Workshop)
ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းများအတွက် လုပ်ငန်းခွင်အရောက် အထူးရက်တိုသင်တန်းများ(Corporate Training) နှင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ(Workshop) များကိုလည်း ဘာသာရပ်အမျိုးအစားအလိုက် သီးသန့်စီစဉ် ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။
လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ အကြံပေးဝန်ဆောင်မှုများ (Operational Consultancy Service)
လက်လီလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများအတွက် အကြံပေးအတိုင်ပင်ခံဝန်ဆောင်မှု (Operational Consultancy Service) များကိုလည်း အထူးညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။
လက်လီလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များ နှင့် လုပ်ငန်းခွင် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်သင်တန်းများ (2015)
Retail Master Retail School သည် လက်လီလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များ နှင့် လုပ်ငန်းခွင် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များကို Certificate မှ Diploma အဆင့်ထိ အထူးပြု သင်ကြားပေးနေသည့် သီးသန့်သင်တန်းကျောင်း ဖြစ်သည်၊ ၂၀၁၅ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ(၁၅)ရက်နေ့မှ စတင် အောက်ဖော်ပြပါ ဘာသာရပ်များကို သတ်မှတ်တန်းခွဲ အချိန်ဇယားများအတိုင်း ဖွင့်လှစ် သင်ကြားပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်၊
တိုကျအမှတျ- ၂၁၊ ၂-လှာ၊ အာသောကလမျး၊ ကြောကျမွောငျး၊ တာမှမွေို့နယျ၊ ရနျကုနျမွို့။
ဖုနျးနံပါတျ- ၀၁-၃၈၃၇၈၅၊ ၀၉-၂၅၄ ၈၄၈ ၉၆၃၊ ၀၉-၂၅၄ ၈၄၈ ၉၆၄၊ ၀၉-၂၅၄ ၈၄၈ ၉၆၅။
အီးမေးလျ – school@retailmastergroup.com
အငျတာနကျဆိုဒျ – www.retailmastergroup.com
Home Our Service About Us
Contact Us E-Book
Powered by iBiz Service Provider Co.ltd